जित कसको नेपालको !
विदेशी मैदान, हावापानी तथा दर्शकका अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृङ्खलामा जित हात पार्नु सामान्य कुरो होइन तर यसै साता युएर्ईमा सम्पन्न एकदिवसीय तथा टी–२० दुवै अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खलामा नेपाली टिमले केही नवीन कीर्तिमानसहित जित हासिल गरेर स्वदेशसमेत फर्किइसकेको छ । युएर्ईसँगको खेलमा नेपाली क्रिकेट टोलीको विशेषता, कमीकमजोरी तथा सबल पक्षका सम्बन्धमा प्रजित शाक्यको विश्लेषण ।
युएर्ईविरुद्धको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा शृङ्खला जित, क्रिकेटले दिएको खुसीको निरन्तरता हो । एकदिवसीय मान्यताप्राप्त गरेपछि नेपालले खेलेको यो दोस्रो शृङ्खला थियो । नेपालले दोस्रो प्रयासमा नै ऐतिहासिक शृङ्खला हात पा¥यो, त्यो पनि विदेशी भूमिमा गएर । त्यतिमात्र होइन, त्यसपछि भएको क्रिकेटको छोटो संरचना टी–२० क्रिकेट शृङ्खला पनि नेपालले आफ्नो पक्षमा पा¥यो । टी–२० मा पनि नेपालले शृङ्खला जितेको यो पहिलोपटक हो । त्यसैले नेपाली सिनियर क्रिकेटको यस सफलतालाई निकै महŒवपूर्ण मानिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा घरबाहिर गएर शृङ्खला जित्नुलाई कम आँकिदैन । विपक्षीको मैदानमा खेल्दा हावापानी, दर्शक, पिच केही पनि आफू अनुकूल हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट टिमसँग हरेक वातावरण, मैदान र पिचमा खेल्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने सोचाइअनुरूप घरेलु टिमले आफू अनुकूल पिच बनाउने गर्छ । त्यसैले पनि हरेक टिमका लागि घरबाहिर लामो शृङ्खला जित्नु विशेष मानिन्छ ।
युएर्ईको भ्रमण पनि नेपालका लागि कठिन हुने अपेक्षित थियो । यसका केही कारण थिए, नेपालले लामो समयदेखि एकदिवसीय क्रिकेट खेलेको थिएन । नेपाली क्रिकेटर टी–२० क्रिकेटमा मात्र व्यस्त थिए । क्रिकेटमा एक संरचनाबाट फटाफट अर्को संरचनामा आफूलाई ढाल्न क्रिकेटरहरूलाई सहज हुँदैन । अर्को प्रमुख कारण थियो नेपाली टिममा चार नयाँ किशोर खेलाडी थिए । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न मानसिक रूपमा तयार छन् अथवा छैनन् भन्ने सक्ने स्थिति थिएन । यी खेलाडी असफल भएमा टिमको संरचना नै बिग्रन सक्थ्यो । अझ पारस खड्का, वसन्त रेग्मी, ज्ञानेन्द्र मल्ल र विनोद भण्डारीबाहेक अन्य खेलाडी पनि युवा छन् । अर्को चिन्ताको विषय युएर्ई जानुअघि नेपालको ब्याटिङको भरोसा पारस र ज्ञानेन्द्र पनि लयमा थिएनन् । तर, युएर्ईविरुद्धको शृङ्खलामा युवा खेलाडी अझ पहिलोपटक मौका पाएका खेलाडी नै निर्णायक खेलाडी साबित भए ।
युएर्ईमा नेपाललाई के कारणले शृङ्खला दिलायो त ? नेपाले दुवै संरचनामा पहिलो खेल हारेर पनि उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै शृङ्खला जितेको हो । यसको प्रमुख कारण नेपाली टिममा ‘म्याच विनर’ हरूको बाहुल्य छ । विगतमा पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेष्वाकर, शक्ति गौचनको भर पर्ने नेपाली क्रिकेटमा नयाँ नायकहरूको जन्म भएको छ । युएर्ई भ्रमणका लागि यसपटक अलराउन्डर सन्दीप जोरा, पवन सर्राफ, भीम सार्की र डेथ बलर अविनाश बोहरालाई विश्वास गरियो । सन्दीप, पवन र भीमले उमेर समूहका क्रिकेटमा राष्ट्रिय जर्सी लगाइसक्नुभएको थियो । बोहराले भने हालै भएको एभरेष्ट प्रिमियर लिगबाट चयनकर्ताको मन जित्नुभएको थियो । यसमध्ये सन्दीप जोरा र अविनाशबाट मौकाको भरपुर फाइदा उठाइयो । टी–२० मा म्यान अफ दी सिरिज बन्नुले पनि अविनाशको छनोट गलत थिएन भन्ने देखाउँछ । परम्परागत शैलीले लगातार योर्कर फाल्ने क्षमता भएको हुनाले पनि अविनाश एकदिवसीय र टी–२० का आगामी खेलमा पनि खतरनाक हतियार बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एकदिवसीय शृङ्खलामा एक खेलमा मात्र ब्याटिङ गर्ने मौका पाएका सन्दीप जोराले सो खेलमा उनले आकर्षक १९ रनको महŒवपूर्ण पाली खेले । टी–२० मा दुवै टिमको ब्याटिङ शृङ्खला विश्लेषण गर्ने हो भने सन्दीप जोरा प्रतिपाली ४१ को औसतसहित सबैभन्दा माथि छ । बिग हिटर सन्दीपले पहिलो टी–२० अविजित अर्धशतक बनाउनुभयो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० मा सर्वाधिक कम उमेरका ब्याट्सम्यानले बनाएको अर्धशतक बन्यो । सन्दीप जोराले डेब्यु खेलमै विश्व कीर्तिमान बनाएका हुन् । साथै तेस्रो टी–२० मा पनि सन्दीपको खेल शानदार थियो ।
यसअघि, रोहित पौडेलले दोस्रो खेलमा ५५ रन बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक कम उमेरमा अर्धशतक बनाएर विश्वकीर्तिमान बनाउनुभएको थियो । उहाँले एकैपटक विश्व क्रिकेटका दुई आदर्श खेलाडी सचिन तेन्दुलकर (टेस्ट) र साहिद अफ्रिदी (एकदिवसीय) को कीर्तिमान तोड्नुभएको थियो । त्यसैले पनि रोहितको कीर्तिमानको चर्चा विश्वभरि भयो । १६ वर्षीय रोहित टिमका कान्छा खेलाडी हुन् । पवन र आरिफका लागि प्रतियोगिता साधारण रह्यो तर यी दुवै पनि नेपाली क्रिकेटका लामो दौडका घोडा हुन् ।
नेपाली क्रिकेटलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्रिकेटरका रूपमा लिइएका दीपेन्द्रसिंह ऐरीबाट । अपेक्षाअनुरूप खेल प्रदर्शन हुन सकेन तर उनले एक खेलमा महŒवपूर्ण पाली खेलेर नेपाललाई जिताउन सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका खेले । ललित राजवंशीले कम मौका पाए ।
यस प्रतियोगितामा शरद भेष्वाकर, ललित भण्डारी, शक्ति गौचन थिएनन् तर त्यसले टिमलाई रत्तिभर असर पारेन । यस अर्थमा नेपाली क्रिकेटमा अहिले ब्याकअप राम्रो छ भन्न सकिन्छ । अहिले थुप्रै खेलाडी राष्ट्रिय टोलीको ढोका ढकढकाइरहेका छन् । विगतमा यस्तो स्थिति थिएन । अहिले कुनै खेलाडीले टिममा आफ्नो स्थान पक्का छ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन । अब राष्ट्रिय टिममा खेलाडीको स्थान प्रदर्शनले मात्र निर्धारण हुनेछ, जुन नेपाली क्रिकेटका लागि राम्रो कुरा भएको छ ।
युएईविरुद्धको यस शृङ्खला युवा शक्तिले जिताए भन्दा फरक पर्दैन । सिनियर खेलाडीमा कप्तान पारसको शतकीय पाली अविस्मरणीय रह्यो । सो शतक नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेटकै पहिलो शतक भएको छ । ज्ञानेन्द्रले सुरुवात पाए तर त्यसलाई ठूलो स्कोर बदल्न सकेनन् । अन्तिम टी–२० मा महŒवपूर्ण समयमा लिएको विश्वस्तरीय क्याचले भने ज्ञानेन्द्रलाई पनि चर्चामा ल्यायो । निर्णायक खेल जतातिर पनि ढल्कने सक्ने स्थितिमा युएईका ब्याट्सम्यानले छक्काका लागि प्रहार गरेको बललाई ज्ञानेन्द्रले दायाँतर्फबाट लामो दूरी दौडँदै डाइभ लगाएर एक हातले लिएको निकै आकर्षकमात्र होइन, यसपछि नेपालको जित लगभग पक्का बनेको थियो ।
दोस्रो एकदिवसीय खेलमा नेपालले फराकिलो जित हासिल गर्नुमा सोमपालका पाँच विकेट निकै महŒवपूर्ण बन्यो, एकदिवसीय क्रिकेटमा पाँच विकेट लिनुलाई एक कोशेढुङ्गा मानिन्छ । टिमका एक प्रमुख सदस्यका रूपमा सोमपालको ब्याटिङ पनि त्यत्तिकै सराहनायोग्य थियो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चामा रहेका लेग स्पीनर सन्दीप लामिछानेले आफ्नो छविलाई गिर्न दिएनन् । उनले एकदिवसीयमा सात र टी–२० मा पाँच विकेट लिए । जुन नेपालको तर्फबाट एक बलरको समग्रमा सर्वाधिक विकेट सङ्ख्या बन्यो । करण केसी युएईसँगको अन्तिम खेलमा म्यान अफ दी म्याच र विनोद भण्डारीलाई एक चम्किलो पाली खेलले अन्य असफलतालाई विस्मृतिमा पार्न सफलता मिल्यो । प्रदीप ऐरेको ब्याट्बाट भने रन बन्न सकेन । युएईमा नेपालको कमजोर पक्ष भनेको प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानको जोडी र विशेष विकेटकिपर ब्याट्सम्यान रह्यो ।
युएर्ईविरुद्धको यो शृङ्खलाबाट खेलाडी, प्रशिक्षकहरूको त्याग, तपस्याले मात्र प्राप्त भइरहेको छ भन्दा उपयुक्त लाग्न सक्छ किनभने नेपालको क्रिकेट सङ्घ (क्यान) निलम्वनमा छ । आईसीसीले सहयोग गरिरहेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नलाई आधिकारिक निकायको खासै आवश्यकता महसुस नहोला तर घरेलु क्रिकेट क्यालेन्डर, पूर्वाधार तथा क्रिकेटका कार्यक्रम बनाउन नेपाली क्रिकेटको आधिकारिक संस्था अत्यावश्यक छ । नेपालमा अहिले निजी संस्थाहरूले इपीएल, डीपीएल, पीपीएलजस्तो क्रिकेटको आयोजना गरेर यो खेललाई व्यावसायिक पनि बनाइसके । नेपाली क्रिकेटमा निजी कम्पनीहरू प्रवेश पनि उत्साजनक छ । त्यसैले आईसीसीको सहयोगको सदुपयोग तथा घरेलु संरचना सुधारेमा नेपालका लागि टेस्ट क्रिकेटको मान्यता असम्भव छैन ।